IsiNgesi sase-Afrika nesiNgesi sase-Afrika (i- AAVE ) iindidi ezahlukeneyo zesiNgesi ezithethwa ngabaninzi baseMerika. Kwakhona kwaziwa ngokuba yi- African American English, isiNgesi saseMnyama, isiNgesi saseNtsundu nesiNgesi kunye ne- Ebonics .
I-AAVE ivela kwimimandla yekhoboka yaseMerika yaseMzantsi Melika, kwaye ikwabelana ngeenombolo zeefowuni kunye negrammatic features kunye neelwimi zesiNgesi zesiNgesi.
Abaninzi baseMerika baseMelika ba-bi-dialectal kwi-AAVE ne- Standard American English .
Dialect and Dialect Ukhethe
Isihloko-Ukuguquka okuNcedisayo (SAI)
I-West African Pidgin Xhosa
I-Zero Copula kunye neZero
"Ngokuhambelanayo neendlela eziqhubekayo kuluntu olukhulu, iilwimi zisebenzisa 'i-African American English' esikhundleni sokuthi 'isiNgesi saseMnyama isiNgesi' (okanye imimiselo emininzi efana neyesiNgesi-Standard Negro English) kwiNgesi yeAfrika yaseMelika, ukuqhubekeka kweentlobo ezahlukahlukeneyo kwiintetho ezisemgangathweni okanye eziqhelekileyo (njengeBryant Gumbel, ngokungaqhelekiyo kwiintetho ezisemthethweni zabamhlophe nabanye abantu baseMerika), kwiintlobo eziqhelekileyo okanye ezingezizo eziqhelekileyo. Kwakungoku kugxininisa kule nkalo yokugqibela uLabov (1972) waqala ekubhekiselele kuyo njengesiNgesi saseNtsundu yesiNgesi. IsiNgesi saseMelika saseMelika sisona siqhelo nje sale sihlandlo, esona sisetyenziswa kakhulu kwiilwimi ... "
"Igama elithi 'Ebonics,' elaliqalwa ngowe-1973 yiqela 'labafundi abaMnyama ... ukusuka ebony (abamnyama) kunye neefowuni (isandi, isifundo sesandi) (R. Williams, 1975) zininzi ukuba azikho ezininzi iilwimi ezinje zifana noko ukuba azifani noko ku-AAVE ngokwemiqathango kunye neentlobo ezizichazayo. "
(UJohn R. Rickford, isiNgesi sase-Afrika sase-Afrika .
"[C] eyabangela ukuveliswa kweMelika yesiNgesi kwaba ukufuduka kwabantu abamnyama bevela eMzantsi emva kweMfazwe yoLuntu kwiindawo zasemadolobheni ezisenyakatho. Bathi bathatha iipatheni zabo zokuthetha zaseMzantsi, kuquka zonke iifom zeelwimi ezazifakwe isakhiwo segrama yokuthetha phakathi kwamakhoboka. Ngokungafani nabafuduki bamhlophe abahlala emadolobheni, ekugqibeleni bawamkela izivakalisi zendawo, abantu abamnyama bahlala behlala bucala kwiighettos ezihlwempuzekileyo kwaye ngenxa yoko, bagcina ulwimi lwabo. IsiNgesi saseNamerika isiNgesi (AAVE). Ukugcinwa kweefom ezahlukeneyo zobuhlanga, ubuhlanga kunye nokubandlululwa kobandlululo kudala kuye kwabangela ezininzi iingcamango eziphosakeleyo zale ntetho. "
(UJohn Baugh, ophuma emlonyeni weeNgcongolo: uLwimi lwaseMelika lwaseMelika kunye noTywala eMfundo .
Iingxenye ezimbini ze-AAVE
"Kucetywayo ukuba i- AAVE inamalungu amabini ahlukeneyo: i-General English [GE] icandelo, elifana negrama ye-OAD [ezinye iilwimi zaseMelika] kunye ne-African-American [AA]. idibeneyo kunye nomnye, kodwa landela iipatheni zangaphakathi zoqhagamshelwano oluqinileyo ... Inxalenye ye-AA ayilona igragram epheleleyo, kodwa i-subset yeefomgram kunye neefical forms ezisetyenziseneyo kunye nenani elipheleleyo kodwa ayikho yonke i-inventory ye-grammatic GE. "
(UWilliam Labov, "iiNkqubo zoNxibelelwano kwi-Afrika-yaseMerika yesiNgesi," kwi -Structure ye-African-American English , ehleliwe ngu S. Mufwene et al., URoutledge, 1998)
"Kwinqanaba elinye, imvelaphi ye- African American English e-USA iya kuhlala yinto yokucinga. Iirekhodi ezibhaliweyo zihamba ngokukhawuleza kwaye zingaphelelanga, kwaye zivulelekile ukuchazwa, ulwazi olumalunga nolwimi malunga nokusetyenziswa kolwimi lukhethiweyo kwaye lukhulu kakhulu. yaboniswa kwintetho yabantu baseAfrika xa beza kuqala 'kwihlabathi elitsha' nakwi-colonial yaseMelika, njengoko kuboniswe kwiintetho ezimnyama kwiintengiso zeentetho kunye neengxelo zeenkundla (Brasch, 1981). Kwakungenakuphikiswa ukuba i-English-lexifier Iilwimi zesiColole zaphuhliswa kwaye ziyaqhubeka zikhula kwiAfrika ye-Afrika - ukusuka kummandla waseNtshonalanga Afrika ukuya eNtshona yeMntla yaseMntla-kwaye ukuba ingqungquthela ephakathi kwabemi baseAfrika eya kwi-colonial yaseMelika yayiquka ukuvezwa kwezi ngqungquthela (uKay noCary, ngo-1995; uRickford, ngo-1997 , Ngo-1999; iWinford, ngo-1997). Ngaphandle kwezi zivume, kunjalo, imvelaphi kunye nesimo seentetho zakudala zaseMelika ziye zaqhubeka ziphikisana ngamandla. "
(Walt Wolfram noErik R. Thomas, Uphuhliso lwe-African American English . Wiley-Blackwell, 2002)
Iimifanekiso eziphambili ze-Pirate zamaxesha onke
Iinqununu ezi-8 zokuDanisa ukuPhumelela kweenjongo zakho
Iingcebiso zoNxibelelwano ngeGreen Card, abafake izicelo zeVisa
Ixabiso lokuzibonakalisa ngokuphumelela ekufundiseni
25 Iindlela Ezilula Zokubonga Ngabafundisi